बलात्कारी बाबाको शिकार युवतीको पूरा चिठी, जुन चिठी छाप्दा पत्रकारको हत्या भयो | Rajmarga
बलात्कारी बाबाको शिकार युवतीको पूरा चिठी, जुन चिठी छाप्दा पत्रकारको हत्या भयो
डेरा सच्चा सौदाको आडमा यौनशोषण गरेका बाबा राम रहिम हत्यारा समेत प्रमाणित भएका छन् । पत्रकार रामचन्द्र छत्रपतिको हत्या अभियोगमा उनलाई सिबिआइ अदालतले हत्यारा ठहर गरेको छ । आज उनीविरुद्ध सजाय सुनाइने तयारी छ । १६ वर्षअघि भएको पत्रकार रामचन्द्र छत्रपतिको हत्याको मुद्दामा आज अन्तिम फैसला आउन लाग्दा धेरैलाई त्यो समाचारबारे चासो भएको छ जुन समाचारका कारण उनको हत्या भयो । यतिमात्र नभइ जुन चिठीका आधारमा समाचार लेखियो त्यो चिठी पनि अत्याधिक चासोको विषय बनेको छ ।
पत्रकार छत्रपतिले सबैभन्दा पहिले बाबाको कालो कर्तुतको पर्दाफास गरेका थिए । उनले सिरसामा भएको दुई साध्वीको बलात्कारको खबर आफ्नो पत्रिका ‘पूरा सच’मा छापेका थिए । यो समाचार छापिएसँगै राम रहिमका मानिसहरु पत्रकार छत्रपतिलाई लगातार धम्की दिन्थे । यति हुँदाहुँदै पनि रामचन्द्रले निडर भएर राम रहिमको कर्तुत बाहिर ल्याउँदै गए । त्यसपछि २४ अक्टोबर २००२ मा उनको घरबाहिरै गोली हानेर हत्या गरियो ।
राम रहीमको बलात्कारको यो कालो कर्तुत एक गुमनाम चिठीका कारण खुलेको थियो । यो चिठीलाई पत्रकार छत्रपतिले आफ्नो पत्रिकामा प्रकाशित गरेका थिए । उनले यो चिठी तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयी, पंजाबका प्रधानन्यायाधीश, हरियाणा हाइकोर्ट लगायतलाई पनि पठाएका थिए । तस्न पेजको यो चिठी सार्वजनिक भएपछि हरियाणा र पंजाब उच्च न्यायालयले सिरसाका डिष्ट्रिक्ट र सेशन जजलाई यसबारे बुझ्न भनेका थिए । सेसन जजले यो मुद्दा अनुसन्धानका लागि सिबीआइलाई दिएका थिए ।
त्यो चिठीमा पीडित युवतीले प्रधानमन्त्री बाजपेयीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेकी थिइन् ‘म पंजाबकी हुँ र विगत ५ वर्षदेखि डेरा सच्चा सौदा सिरसामा साधु युवतीको रुपमा काम गरिरहेकी छु । मजस्तै सयौं युवतीहरु डेरामा ६ देखि १८ घण्टा सेवा गर्छन् । यहाँ हाम्रो शारीरिक शोषण भइरहेको छ । म बिए पास भएकी युवती हुँ । मेरो परिवारका सदस्य महाराजका अन्ध भक्त छन्, जसको प्रेरणाबाट म डेरामा साधु बनेकी थिएँ ।
साधु बनेको २ वर्षपछि एक दिन महाराज गुरमितकी प्रमाशया साधु गुरजोतले राती १० बजे मलाई बताए कि महाराजले गुफामा बोलाएका छन् । म पहिलो पटक त्यहाँ जाँदै थिएँ, म धेरै खुसी थिएँ । यो थाहा पाएर कि आज स्वयं परमात्माले मलाई बोलाउनुभएको छ । गुफामा माथि गएपछि मैले देखें कि महाराज बेडमा थिए र हातमा रिमोट थियो । अगाडि टिभीमा ब्लू फिल्म चलिरहेको थियो । सिरानी नजिकै रिभल्भर राखिएको थियो । म यो सब देखेर आश्चर्यचकित भएँ, खुट्टामुनिबाट जमिन भासियो ।
यो के भइरहेको छ ? महाराज यस्ता होलान्, मैले सपनामा पनि सोचेकी थिइन । महाराजले टिभी बन्द गरे, मलाई सँगै बसाले र पानी खुवाए । त्यसपछि भने मैले तिमीलाई आफ्नी खास प्यारी सम्झेर बोलाएको हो । मेरो यो पहिलो दिन थियो । महाराजले मलाई अंगालो हालेर भने कि म तिमीलाई मन देखि चाहन्छु । तिमीसँग प्रेम गर्न चाहन्छु । तिमीले हामीसँग साधु बन्ने बेला आफ्नो तन, मन, धन, सतगुरुलाई अर्पण गर्ने भनेकी थियौ त्यसैले अब यो तन मन मेरो हो ।
मैले विरोध गरेपछि उनले भने कुनै शंका छैन म नै भगवान हुँ । जब मैले सोधें कि के भगवान यस्तो काम गर्छन् ? त्यसपछि उनले भने श्रीकृष्ण भगवान थिए । श्रीकृष्णकहाँ हजारौं गोपिनहिरु थिए जससँग उनी हरेक दिन प्रेमलीला गर्थे । त्यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरु उनलाई परमात्मा मान्छन् । यो कुनै नयाँ कुरा होइन र मैले चाहें भने यही रिभल्भरले तिम्रो प्राण पखेरु उडाएर दाहसंस्कार गर्न सक्छु ।
तिम्रो परिवारका सदस्य हरप्रकारले मेरो विश्वास गर्छन् र मेरो गुलाम हुन् । उनीहरु मजान सक्दैनन् यो कुरा तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ । सरकारमा मेरो धेरै चल्छ । हरियाणा र पंजाबका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री मेरो चरण छुन्छन् । नेताहरु मसँग समर्थन लिन्छन् पैसा लिन्छन् र मेरो विरुद्ध कहिल्यै जाने छैनन् । म तिम्रो परिवारबाट जागिर लागेका सबै सदस्यलाई जागिरबाट निकालिदिन्छु । सबै सदस्यलाई मारिदिन्छु र सबुत पनि छोड्दिन । यो तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मैले पहिले पनि डेराका प्रबन्धकलाई मारिदिएको थिएँ जसको आजसम्म अत्तोपत्तँे छैन । न कुनै सबुत छ । म पैसाको बलमा राजनीति, पुलिस र न्याय किनिदिन्छु ।
यसरी मलाई बलात्कार गरियो र पछिल्लो तीन महिनामा २०–३० दिनपछि फेरि गरिँदैछ । हामीलाई सेतो कपडा लगाउन, शिरमा चुन्नी राख्न, कुनै पुरुषतर्फ आँखा उठाएर नहेर्न, पुरुषसँग ५–१० फिट दूरी बनाएर राख्न महाराजको आदेश छ । हामी देखाउनको लागि देवी हौं तर हाम्रो हालत वेश्याजस्तै छ । मैले एक पटक परिवारमा भनेकी थिएँ कि यहाँ डेरामा सबथोक ठिक छैन । परिवारले उल्टै रिसाएर भन्न थाले कि भगवानसँग बस्दा ठिक छैन भने कहाँ ठिक हुन्छ ?
मेरो मनमा खराब विचार आउन लागेका छन् । म विवश छु । यहाँ सतगुरुको आदेश मान्नुपर्छ । यहाँ कुनै पनि २ युवती आपसमा कुरा गर्न पाउँदैनन् । परिवारलाई फोन गरेर कुरा गर्न पाउँदैन् । केही दिनअघि जब बठिण्डाकी युवती साधुले कहाराजको कालो कर्तुतको सबै युवतीको सामु खुलासा गरिन्, कैयौं साधु युवतीले मिलेर उनलाई कुटे । कुरुक्षेत्र जिल्लाकी उक साधु युवतीले घर गएका बेला परिवारलाई सबै बताइन् । उनका दाजु ठूला सेवादार थिए जो सेवा छोडेर डेरासँग नाता तोडिसकेका छन् ।
संगरुर जिल्लाकी एक युवतीले डेराबाट घर आएर डेराको कालो कर्तुतको बारेमा सबैलाई बताइन् । त्यसपछि डेराका सेवादार गुण्डाहरु बन्दुक लिएर घरमै आएर धम्की दिए । अतः तपाइँसँग अनुरोध छ कि यी सबै युवतीहरुसँगै मलाई पनि मेरो परिवारसँगै मारिनेछ, यदि मैले यो चिठीमा आफ्नो नाम लेखें भने । हाम्रो डाक्टरी जाँच गरियोस् ताकि हाम्रो परिवारसँगै तपाइँलाई पनि थाहा हुनेछ कि हामी कुमारी देवी साधु हौं वा होइनौं । यदि होइनौं भने कोबाट बर्बाद पारिएका हौं ।
Previous post: जंगलमा युवतीको कपडा लगाएको अवस्थामा युवकको लाश भेटिएपछि हंगामा
Next post: शेयर बजार : सामान्य अङ्कले घट्यो
अवैध रुपमा लुकाई राखिएको हुचिल चरा सहित पक्राउ